Nhau - Chii chinonzi slew drive uye zvazvakanakira
Semhando yesimba rakachena uye risina kusvibiswa, simba rezuva rine tarisiro yekusimudzira zvakanyanya, uye rave simba girini rakagadzirwa nenyika zhinji. Nekudaro, kune mamwe matambudziko musimba rezuva, senge yakaderera density, kupindirana, uye iko kunongedzera uye kusimba kwekuvhenekera kunochinja nenguva. Mazhinji echinyakare mapaneru ezuva akagadziriswa pane imwe kona, iyo isingashanduke nekumira kwezuva, izvo zvinokanganisa zvakanyanya mafotoelectric kutendeuka kushanda. Zvinoenderana nekuverenga: kana paine kutsauka kwemadhigirii makumi maviri neshanu pakati pefotoelectric system uye mwenje wezuva, simba rekubuda kweiyo photovoltaic array ichaderedzwa neinenge 10% nekuda kwekudzikiswa kwechiitiko chakamira che radiation simba.
Gore rese kutenderera, chirimo, zhizha, matsutso uye nguva yechando, kumuka nekudonha kwezuva uye kona yechiedza chezuva chiri kuchinja kubva masikati kusvika usiku. Naizvozvo, maitiro ekuchinja iyo kona yebhatiri pane iyo mwenje kona yekuvandudza iyo photovoltaic shanduko mwero inoda yedu akauraya kutyaira . Nhasi, ndinokutora kuti uzive chinonzi drive yakauraya chii.
1. Tsanangudzo ye akauraya kutyaira.
Slew drive mudziyo rudzi rutsva rwezvinhu zvinotenderera, izvo zvakagadzirwa nehonye giya, rin'i rinosungira , goko nemota. Sezvo chikamu chepakati chinotora chinotakura chinotakura, saka inogona kutakura axial simba, radial simba uye kupidigura nguva panguva imwe chete. Slew drive uye echinyakare michina michina ichienzaniswa, ine hunhu hwekuisa nyore, nyore kugadzirisa uye kuchengetedza nzvimbo yekumisikidza kusvika padanho rakakura. Ichi chigadzirwa chinogona kushandiswa zvakanyanya mundiro inoremamota yekufambisa, crane yemidziyo, rori yakaiswa kireni uye kushanda kwepamusoro-soro.
2. Slew drive dhizaini
Slew drive inogona kukamurwa kuita imwechete honye kutyaira, mbiri honye dhiraivha uye yakakosha mhando rotary drive. Xuzhou Wanda slewing inobereka co., Ltd yaigona kuuraya yakauraya mota muSE Seires uye WEA Series.
SE yakateerana inotora toroidal honye dhizaini dhizaini, yakawanda-zino kusangana, yakasimba kukanganisa kuramba, inokodzera mwenje mutoro uye yakaderera kumhanya kunyorera Zvakadai sezuva tracker system, Diki dziviriro yezvigadzirwa michina nezvimwe.
WEA nhepfenyuro inotora yakakombama zino pechimiro dhizaini, iyo ine yakasimba kwazvo kurwisa-kuneta uye kugona kwegluing. Iyo yakakodzera kune inorema-basa uye yepakati-kumhanya kunyorera. Zvakadai seMuchina wekuvaka, michina yekuvaka nezvimwe.
3. Zvakanakira zvitatu zvekuuraya drive
Nekuda kwekubatanidzwa kwepamusoro kweiyo yakaurayiwa dhiraivhu, vashandisi havafanirwe kutenga nekugadzirisa chikamu chimwe nechimwe chechigadzirwa chinotenderera chimwe nechimwe. Kune imwe nhanho, zvakare inoderedza maitiro ekugadzirira pakutanga kwekugadzira, nokudaro ichivandudza zvakanyanya kugadzirwa kwevashandi.
Worm giya Kutapukirwa kune hunhu hwekuchinja kuzvivharira, iyo inogona kuona reverse kuzvivharira, kureva kuti, honye chete ndiyo inogona kutyaira honye giya, asi kwete giya rehonye. Iyo yekuchengetedza chinhu cheinjini main uye yekucheka michina inogona kuvandudzwa zvakanyanya mukukwirira-kwakakwirira mashandiro. Zvichienzaniswa neyakajairwa michina michina, akauraya kutyaira ine zvakanakira kuiswa kuri nyore, nyore kugadzirisa uye kuchengetedza nzvimbo yekumisikidza.
c.) Gonesa dhizaini dhizaini
Zvichienzaniswa neyakajairwa giya kutapurirana, honye giya kutapurirana kunogona kuwana yakati kurei kudzikisira reshiyo Mune zvimwe zviitiko, inogona kuchengetedza zvikamu zvekudzora zveinjini huru, kuitira kudzikisa mutengo wekutenga wevatengi uye kudzikisira zvakanyanya kutadza kweinjini huru.
Izvo zviri pamusoro ndiko kuiswa kweye slewing drive. Kana iwe uine chero mimwe mibvunzo, unogona kutaurirana nesu zvakare, tinogamuchirwa kuTaura nesu !